Fanosihosena zon’olombelona :: Notetitetehin’ny zandary tamin’ny antsy ny tendan’ilay dahalo sy ny sofiny • AoRaha
Fanosihosena zon’olombelona Notetitetehin’ny zandary tamin’ny antsy ny tendan’ilay dahalo sy ny sofiny
Naiditra am-ponja vonjimaika, any Tsiafahy, ny efatra tamin’ireo zandary voatonontonona ho tsy manaja zon’olombelona , afak’omaly alina. Misy telo hafa naiditra am-ponja eny Antanimora. Hita tamin’ny horonantsary ireo zandary nahatratra dahalo efatra, tany Mandrosonoro-Ambatofinandrahana, tamin’ny volana aogositra 2018.
“Miaiky ny zandarimaria fa namono olona an-kitsirano ireo zandary ireo”, araka ny nolazain’ny jeneraly Gelle Serge, lehiben’ny Etamazaoron’ny zandarimaria.
Nanao hetsika manokana ny Zandarimaria taorian’ny nahafaty zandary roa voatifitry ny dahalo tany Ambatofinandrahana, tamin’ny taon-dasa. Toy ireny amin’ny sarimihetsika ahitana olona lian-dra ireny ny zava-nitranga tao amin’ny horonantsary izay ahiana ho ireo zandary ihany no naka azy. Notapahiny ankitsirano ny sofiny, avy eo nasain’ny nohanin’ny iray tamin’ireo dahalo ihany. Notetitetehin’izy ireo ny tendan’ny dahalo iray. Nentiny teo ambodimanga ireo dahalo, taorian’izay.
Nampatoriana tamin’ny tany ny iray. Notetehin’ny zandary iray tamin’ny antsy ny tendan’io voalaza fa dahalo namono nahafaty zandary roa io. Nitsipaka indray mandeha ny trongotr’ilay dahalo dia tapitra ny ainy. Ny iray faharoa indray nasaina nandohalika. Notifirina avy eo ka nipitika ny lohany. Ireo roa hafa kosa dia notifirina ankitsirano, araka ny voarakitr’ilay horonantsary ihany.
Hitan’ny jeneraly Ravalomanana Richard, Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria (Seg) ilay horonantsary tamin’ny herinandro lasa teo. Nanome baiko ny manamboninahitra ambaniny iray izy nandeha nidina tany an-toerana nanao fanadihadiana.
Adidy ny manasazy
“Herintaona mahery izay no nitrangan’io toe-javatra io. Tsy nisy na ny havan’ireo namoy ny ainy aza tonga taty amin’ny zandarimaria na tany amin’ny Fitsarana nametraka fitoriana noho ny vono nahazo ny havany. Izahay kosa ato amin’ny zandarimaria, vao nahita ny horonantsary dia nanokatra fanadihadiana. Tao anatin’ny andro vitsy monja dia vita izany ary fantatra avokoa ireo zandary tao anatin’ilay horonantsary. Miisa fito izy ireo no samy natolotra ny Fitsarana, ary samy naiditra am-ponja”, hoy ny fanazavan’ny jeneraly Gelle Serge, lehiben’ny Etamazaoron’ny zandarimaria na Cem.
Manoloana ity tranga fanitsakitsahana ny zon’olombelona tamin’ny fitondrana teo aloha ity dia naneho ny heviny ny jeneraly Ravalomanana Richard. “Aleoko lavitra manolotra ireo zandary miisa fito ny Fitsarana satria tena zava-doza no nitranga, toy izay ny zandarimaria malagasy no maloto noho ny zavatra nataon’izy ireo. Mamerina foana aho ho an’ny zandary rehetra fa tsy misy hiray tsikombakomba amin’ny fanitsakitsahana zon’olombelona na ny lalàna izahay tompon’andraikitra ankehitriny ato amin’ny Zandarimaria. Mampalahelo ny maheno hoe enim-polo mahery izao ny zandary naiditra am-ponja vonjimaika tamin’ity taona ity fotsiny saingy tsy noho ireny zandary manao hadalana ireny no hanimbana ny Zandarimaria fa indrindra hampijaliana ny vahoaka”, hoy ny Seg.
Nanazava momba ireo zandary naiditra am-ponja ihany koa ny Cem. “Tsy manahirana ny manasazy fa ao anatin’ny asa izany”, hoy izy. “Toy ny manasazy ny zanaka ao an-trano io. Te hanana ny tsara ny tena. Adidy aza izany raha ny tena marina. Ny tsy fanaovana an’izay dia midika ho firaisana tsikombakomba amiko. Ny zandarimaria tsy fieren-jiolahy. Matoa ireo zandary ireo naiditra am-ponja dia misy vesatra izany”, raha ny fanazavana ihany.
Hetsika « aro loza » :: Nifanehitra tamin’ny polisy ireo fiara sy môtô an’arivony tsy ara-dalàna
Voina teny an-dalana :: Lehilahy namoy ny ainy tamin’ny andrin-jiro